चञ्चले गायक बोगटी : बिहेपछि पुराना प्रेमका कुरा के गर्नु !
काठमाडौं, २३ मंसिर – नेपाली पप संगीतको क्षेत्रमा बाबु बोगटीलाई धेरैले सम्झन्छन् । ‘सान्नानी तिमीलाई हिर्काउँला लौरीले ठ्याक्कठ्याक्कठ्याक्क’ र ‘फेरि त्यो दिन फेरि त्यो रात’ लगायतका दर्जनौं गीत गाएर आफूलाई गायनमा स्थापित गराएका बोगटीले आफूलाई सफल नायकका रूपमा समेत स्थापित गरेका छन् ।
मोरङको लेटाङमा जन्मेका बोगटी स्कुल पढ्ने बेलादेखि गाउन र अभिनय गर्नमा रुचि राख्थे । शिक्षकहरूले उनको प्रशंसा गर्थे । उनी प्रफुल्ल हुन्थे । स्कुले उमेरमा गाएका ती गीतले भने उनलाई साँच्चै नै परिचित बनाउन भूमिका खेल्यो ।
पहिलो एकोहोरो प्रेम र संगीत सपना
सबैको पहिलो प्रेम विद्यालय पढ्ने उमेरमा नै हुन्छ भन्ने लाग्छ बोगटीलाई । ‘कक्षा आठमा पढ्दा म एक युवतीलाई मन पराउँथे, त्यो प्रेम सफल भएन’ उनी भन्छन्, ‘त्यो एकोहोरो प्रेम थियो ।’
एसएलसीलगत्तै उनी २०५५ सालमा आफ्नो पढाई पूरा गर्न काठमाडौं आए । त्यसपछि आफ्नो सपना पूरा गर्न काठमाडौंको ललितकला क्याम्पसमा भर्ना भए । उनको त्यतिखेरको सपना संगीतका क्षेत्रमा चिनिने थियो ।
‘गायनमा नआएको भए विदेश जान्थें’
उनी गायक नभएको भए के हुन्थे? उनी भन्छन्, ‘ गायक नभएको भए विदेश जान्थें । पैसा कमाएर घर पठाउँथें । आम मान्छेले गरेको नै यही हो अहिले ।’ तर उनलाई नेपालमा कलाकारको भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने लाग्दैन । कलाकार औसत रुपमा बाँच्न त सक्छन् तर प्रशस्त कमाउन सक्दैनन् । उनी आफूले संगीतबाट धेरै कमाउन नसकेपनि खुशी भएको बताउँछन् ।
सान्नानी तिमीलाई हिर्काउँला लौरीले ठ्याक्क ठ्याक्क ठ्याक्क
यो गीत उनको चर्चित गीतमध्येको एक हो । लोकपप शैलीको यो संकलित गीत उनले आफ्नी आमाको सहयोगमा तयार पारेका थिए । रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षणमा उत्तीर्ण भएपछि उनले एल्बम निकाल्न आमालाई आफ्नो पालाको कुनै चलेको गीत निकाल्न आग्रह गरे । आमाले गीत संकलन गरिदिनुभयो । ‘त्यसमा भएका केही शब्दमा परिमार्जन गरेर गीत रेकर्ड गरे । रेकर्ड गराएपछि त्यो गीत हिट भयो,’ उनी सफलताको क्षण सम्झन्छन् ।
सानैदेखि चञ्चल स्वभावका बोगटी अहिले पनि आफू उस्तै स्वभावको रहेको बताउँछन् । उनलाई आफ्नो वास्तविक व्यवहार कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ । उनी भन्छन्, ‘यदि कसैले आफ्नो व्यवहार बदल्न चाहन्छ भने त्यो बनावटी हुन्छ । दीर्घकालीन हुँदैन ।’
बिहेपछि पुराना प्रेमका बारेमा बोल्न त्यति ठीक नहोला
प्रेमगीत धेरै गाउने यी गायक प्रेमका बारेमा के सोच्छन् ? ‘प्रेम मान्छेलाई बाँच्नका लागि नभई नहुने एउटा तत्व हो,’ बोगटी भन्छन् । पहिलो प्रेम असफल भएपनि त्यसपछिका प्रेमका बारेमा भने उनी खुल्न चाहन्नन् । उनले हाँस्दै भने, ‘बिहेपछि भने पुराना प्रेम किस्साका बारेमा बोल्न त्यति ठीक नहोला । उसो त उनी कुरा बुझ्नेखालकी छिन् ।’ उनकी श्रीमती अहिले अमेरिकामा छिन् ।
गजल क्याफे घाटामा
भारतीय सेनाका छोरा बोगटीलाई भने कहिल्यै पिताको पेशा अपनाउन मन लागेन । सैनिक जिन्दगी उनलाई होस्टेल बसेझैं लाग्यो । बरू उनलाई व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यसैले उनले साथीहरूसँग मिलेर २०६६ सालतिर काठमाडौंको दरबारमार्गमा ‘गजल क्याफे’ खोले । तर पछि विविध कारणले त्यो क्लब पनि बन्द गर्नुपरेको उनी सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यापार त थालियो तर उल्टो घाटामा बेच्नुप—यो ।’
बाटोमुनि फूल फुल्यो
पछिल्लो समय चलचित्र ‘बाटोमुनिको फूल’बाट नायकका रूपमा उदाएका बोगटी आफू अभिनेताभन्दा पनि गायक तथा संगीतकार भएको सुनाउँछन् । तर उनी एक्कासि चलचित्रमा आएका भने होइनन् । चक्लेटी बोगटी भन्छन्, ‘म केटाकेटी उमेरमा नै नाटकमा अभिनय गर्थें । साथीहरूलाई अभिनय गर्न सक्छ भन्ने लागेर मलाई मौका दिएका हुन् तर म चलचित्रलाई त्यति महत्व दिन्नँ ।’ उनी थप्छन्, ‘संगीत मेरो माध्यम हो । म यसका लागि समय निकाल्छु । फिल्म त चौतारीमा भेटिएको एउटा माध्यममात्र हो ।’
सबैभन्दा गाह्रो संगीत सिर्जना
संगीत सिर्जना गर्न त्यति सहज लाग्दैन उनलाई । सबैभन्दा गाह्रो उनलाई शब्द सृजना गर्न लाग्छ । उनले आफ्ना केही एल्बम् र केही चलचित्रमा संगीत दिएका छन् । ‘बिहानको समयमा संगीत कम्पोज गर्न रमाइलो लाग्छ मलाई’, उनी सुनाउँछन् ।
अहिले संगीतको माध्यम फेरिएको उनलाई लाग्छ । पहिले एफएम र टिभीमा भर पर्नुपरेपनि अहिले त्यस्तो स्थिति नभएको उनी बताउँछन् ।
अचेल चर्चित हुन सजिलो
बोगटीका अनुसार अचेले चर्चित हुन गाह्रो छैन । दर्शक तथा श्रोताले अहिले कुन गीत बजारमा आयो भन्दापनि युट्युबमा कुन गीत हिट भएको छ भन्ने कुरालाई महत्व दिन्छन् भन्ने उनलाई लाग्छ । ‘कलाकार विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएपनि उनीहरू आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्छन् ।’ उनी भन्छन्, ‘अहिले युट्युबमा हाम्रो सृजना हेरेर तत्काल कमेन्ट गर्न सक्छन् । यो प्रविधिको सकारात्मक पक्ष हो ।’
बजार बलियो तर कमाई कमजोर
अहिले संगीतको बजार कमजोर नभएपनि पारिश्रमिकको कमाईको हिसाबले कमजोर भएको उनलाई लाग्छ । अरू देशमा पाइरेसी सम्बन्धी कानुन छ । युट्युबमा अनुमतिबिना अपलोड गर्न पाइँदैन । युट्युबमा अपलोड गरेबापत कम्पनीले पैसा दिन्छन् तर नेपालमा भने उल्टो पैसा माग्छन् भन्ने उनले बुझेका छन् ।
चलचित्र ‘अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल’को कम्पोजिसन भर्खरै सकिएको बताउने बोगटीलाई छिटै चलचित्र ‘नेप्टे’मा समेत देख्न पाइनेछ । भुटानी शरणार्थीको कथामा बनेको चलचित्र ‘देश खोज्दै जाँदा’मा समेत आफ्नो मुख्य भूमिका रहेको उनी बताउँछन् ।
नयाँ आउने गायक तथा कलाकारलाई केही फरक विषयवस्तुसहित समय अनुसार परिमार्जन हुन र धेरै ठूला सपना नदेख्न उनी सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘नवगायकले श्रोताको भावनालाई बुझेर समय अनुसार आफूलाई परिमार्जन गराउन जरूरी छ किनकि हाम्रो बजार सानो छ ।